Vitamin C – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဗီတာမငျစီ အကွောငျး ဘာတှေ သိထားလဲ
ကြှနျတျော လူတျောတျော မြားမြားကို ဗီတာမငျ စီ ကဘာအတှကျကောငျးလဲ မေးရငျ တျောတျောမြားမြား ပွနျဖွတောကတော့ ဝိတျကစြတေယျလို့ပဲ ဖွတောမြားပါတယျ။ အခုထိ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြား အရ ဗီတာမငျ C က ကိုလကျစထရော ကစြတေယျလို့ပဲ စာတမျးတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ဝိတျကတြယျလို့တော့ အခုထိရှာမတှသေ့ေးပါဘူး။
တခွားသော လူသိပျမသိကွသေးတဲ့ ဗီတာမငျ C ရဲ့ကောငျးကြိုးလေးတှေ ရှိပါသေးတယျ။
1. အသားအရကေို တငျးရငျးစခွေငျး
2. အရိုးဖှဲ့စညျးတညျဆောကျမှု့ကို အားပေးခွငျး
3. အနာ ကကျြလှယျစခွေငျး
4. ခန်ဓာကိုယျ အတှငျးရှိ ကိုလကျစထရော မြားကို အဆီခဖြေကျြရာတှငျ အသုံးလိုတဲ့ သညျးခွရေညျ ဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲပေးနိုငျခွငျး။
5. လူတှရေဲ့စိတျကို ပြျောအောငျ၊ စိတျပူပနျအောငျ၊ စိတျဓါတျကအြောငျ စတာတှကေို ထိနျးခြုပျပေးနတေဲ့ ဆီရိုတိုနငျ (Serotonin) လို့ချေါတဲ့ ဓါတျတဈမြိုးထှကျအောငျလညျး အားပေးပါတျာ။ အကွမျးဖငျြး အားဖွငျ့ Serotonin (ဆီရိုတိုနငျ) နညျးရငျ စိတျဓါတျကြ ဝဒေနာခံစားရတတျပါတယျ။
6. ဓါတျတိုးဆနျ့ကကျြသတ်တိ ရှိတဲ့ အတှကျ ကငျဆာရောဂါ ဖွဈပှားမှု့ကို လြှော့ကစြနေိုငျခွငျး။
7. ကိုယျခံစှမျးအား မွှငျ့တငျပေးတဲ့ အတှကျ ရာသီပျေါတုပျကှေး ရောဂါ နှငျ့ အဖွားသော ဘတျတီးရီးယား၊ ဗိုငျးရပျဈ ရောဂါပိုးမှားမြားကို လညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
8. နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ ကိုကာကှယျပေးခွငျး
9. ဆီးခြိုရောဂါ ကို ကာကှယျပေးခွငျး
10. ဦးနှောကျနှငျ့ အာရုံကွောဆိုငျရာ ရောဂါမြား(Neurodegenerative diseases) ကိုကာကှယျပေးခွငျး။
ဗီတာမငျ C ကဘာတှစေားရငျ ရမလဲ
အမြားစု သိထားကွတဲ့ အတိုငျး ခဉျြတဲ့ အသီးတှဆေို ဗီတာမငျ C ကွှယျဝ ပါတယျ။ တခွားကြှနျတျောတို့ မထငျမှတျထားတဲ့ အစားအစာမှာလညျး ဗီတာမငျ C ကွှယျဝကွပါတယျ။ ဥပမာ-
1. ငရုတျပှ အနီ/အစိမျး
3. လိမ်မျော၊ သံပုရာ
9. ဂရိတျဖရုသီး စတာတှေ စားပေးလို့ရပါတယျ။
လူခန်ဓာကိုယျမှာ ပုံမှနျ ဘယျလောကျ ရှိလဲ
အဓိက ပွဿနာ ကတော့ ဗိုကျအောငျ့ ဗိုကျနာဖွဈပွီး ဝမျးခဏခဏ သှားတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးကလညျး ဗီတာမငျ စီ အားဆေးတှေ ကို လိုတာထကျပို သောကျနတေဲ့ လူတျောတျော မြားမြားမှာဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ဖွဈလာရငျတော့ ဆေးသောကျတာ ကို ရပျလိုကျသငျ့ပါတယျ။ သောကျတာ ရပျပွီး 2-3 ရကျနတောနဲ့ ပုံမှနျ ပွနျဖွဈသှားပါ လိမျ့မယျ။
ဘယျလို လူတှေ မှာ ဗီတာမငျ C ခြို့တဲ့လရှေိ့လဲ
1. အရကျ အလှနျအကြှံသောကျသုံးသူမြား
2. ဆေးလိပျသောကျ သူမြား
4. ပိုးသတျဆေး သောကျနသေူမြား
5. အနာ သကျသာဆေးသောကျနသေူမြား
6. ဓါတျဆီ ရနေံဆီ တှေ နှငျ့ အမွဲ ထိတှေ့ ကိုငျတှယျနရေသူမြား
7. သတ်တုတှငျး၊ သတ်တု ပစ်စညျးမြား နှငျ့ ထိတှေ့ ကိုငျတှယျနရေသူမြား။
အထကျဖျောပွပါ ဗီတာမငျ C ခြို့တဲ့ နိုငျတဲ့ သူမြား အနနေဲ့ သာမာနျလူထကျ ဗီတာမငျစီ ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြား ပို စားပေးဖို့လိုပါတယျ။ လိုအပျမှသာ ဆေးဝါး အကူအညီ ကို ဆရာဝနျ နှငျ့ သခြော ဆှေးနှေး တိုငျပငျပွီး မှသာ သောကျဖို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။
ဗီတာမင်စီ အကြောင်း ဘာတွေ သိထားလဲ
ကျွန်တော် လူတော်တော် များများကို ဗီတာမင် စီ ကဘာအတွက်ကောင်းလဲ မေးရင် တော်တော်များများ ပြန်ဖြေတာကတော့ ဝိတ်ကျစေတယ်လို့ပဲ ဖြေတာများပါတယ်။ အခုထိ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ ဗီတာမင် C က ကိုလက်စထရော ကျစေတယ်လို့ပဲ စာတမ်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဝိတ်ကျတယ်လို့တော့ အခုထိရှာမတွေ့သေးပါဘူး။
တခြားသော လူသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ဗီတာမင် C ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။
1. အသားအရေကို တင်းရင်းစေခြင်း
2. အရိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု့ကို အားပေးခြင်း
3. အနာ ကျက်လွယ်စေခြင်း
4. ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းရှိ ကိုလက်စထရော များကို အဆီချေဖျက်ရာတွင် အသုံးလိုတဲ့ သည်းခြေရည် ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း။
5. လူတွေရဲ့စိတ်ကို ပျော်အောင်၊ စိတ်ပူပန်အောင်၊ စိတ်ဓါတ်ကျအောင် စတာတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ ဆီရိုတိုနင် (Serotonin) လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးထွက်အောင်လည်း အားပေးပါတာ်။ အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့် Serotonin (ဆီရိုတိုနင်) နည်းရင် စိတ်ဓါတ်ကျ ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။
6. ဓါတ်တိုးဆန့်ကျက်သတ္တိ ရှိတဲ့ အတွက် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု့ကို လျှော့ကျစေနိုင်ခြင်း။
7. ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အတွက် ရာသီပေါ်တုပ်ကွေး ရောဂါ နှင့် အဖြားသော ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးမွှားများကို လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
8. နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ကိုကာကွယ်ပေးခြင်း
9. ဆီးချိုရောဂါ ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
10. ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ(Neurodegenerative diseases) ကိုကာကွယ်ပေးခြင်း။
ဗီတာမင် C ကဘာတွေစားရင် ရမလဲ
အများစု သိထားကြတဲ့ အတိုင်း ချဉ်တဲ့ အသီးတွေဆို ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝ ပါတယ်။ တခြားကျွန်တော်တို့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အစားအစာမှာလည်း ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝကြပါတယ်။ ဥပမာ-
1. ငရုတ်ပွ အနီ/အစိမ်း
3. လိမ္မော်၊ သံပုရာ
9. ဂရိတ်ဖရုသီး စတာတွေ စားပေးလို့ရပါတယ်။
လူခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုံမှန် ဘယ်လောက် ရှိလဲ
သွေးထဲမှာ 60-100 mmol/dl ရှိပါတယ်။
ဗီတာမင် C အများကြီးစားရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ
အဓိက ပြဿနာ ကတော့ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာဖြစ်ပြီး ဝမ်းခဏခဏ သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကလည်း ဗီတာမင် စီ အားဆေးတွေ ကို လိုတာထက်ပို သောက်နေတဲ့ လူတော်တော် များများမှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်လာရင်တော့ ဆေးသောက်တာ ကို ရပ်လိုက်သင့်ပါတယ်။ သောက်တာ ရပ်ပြီး 2-3 ရက်နေတာနဲ့ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။
ဘယ်လို လူတွေ မှာ ဗီတာမင် C ချို့တဲ့လေ့ရှိလဲ
1. အရက် အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူများ
2. ဆေးလိပ်သောက် သူများ
4. ပိုးသတ်ဆေး သောက်နေသူများ
5. အနာ သက်သာဆေးသောက်နေသူများ
6. ဓါတ်ဆီ ရေနံဆီ တွေ နှင့် အမြဲ ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်နေရသူများ
7. သတ္တုတွင်း၊ သတ္တု ပစ္စည်းများ နှင့် ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်နေရသူများ။
အထက်ဖော်ပြပါ ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ နိုင်တဲ့ သူများ အနေနဲ့ သာမာန်လူထက် ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ ပို စားပေးဖို့လိုပါတယ်။ လိုအပ်မှသာ ဆေးဝါး အကူအညီ ကို ဆရာဝန် နှင့် သေချာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီး မှသာ သောက်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။